Mugdigii Nolosheyda Iyo Abaalka Aadmiga Qiso Aad u Xanuun badan
Tuesday September 11, 2012 - 18:43:00 in Sheekooyin by Super Admin
Askartii wey naga diideen In gacaliyehegii Mahad aan ka sii deyno ,Waxeeyna noo sheegeen In Mahad loo dhaadhicinayo Xabsiga weyn ee Magaalada Gaarisa.
Xaalada aad beey iigu adkaatay ,waayo wax aan sameeyo maba garaanayo toloow gaariga ma iska fasaxdaa ? mise intaad aado gur
eyga baan lacag u soo qaadaa ? !!! Maya Maya macquul maahan waa in aan iska fasaxaa gaariga,waayo suurta gal ma’ahan in meel cidlo ah aan uga tago jaceylkeyga.
Qadar daqiiqado ah oo aan isla sheekeeysanayay kadb,waxaan go’aan ku gaaray in aan la joogo Mahad inta arrintiisa ay meel uga dhaceyso.
Mahad waxaa loo gudbiyay xabsiga waxaan loo sheegay in Sedex maalmood gudahood lagu soo taagi doono Maxkamad.
Aniga waxaan Mahad la galay xabsiga si uu san u dareemin cidlo, inkastoo aniga aan ahaa qof xor ah hadane qabiga ayaan uga jiray xabsiga.
Waxaan ku kala jirnay labo qol oo isku dhegan ku waasi oo lagu kala xiro raga iyo dumar,Muuqaalka xabsiga wuxu ahaa mid aad u yar oo ku dhisan jiingad ,Magaaladna aad beey u kulushay runtii gacaliyeheyga Mahad yare wuxuu maray ciqaab adag taasoo sababteedu aan anigu leeyahay.
Sedex Maalin kadib waxaa Mahad loo ka xeeyay Maxkamadda,Waxaana lagu soo oogay dacawad ah in ninkaan la soo qabtay isgoo dalka si sharci daro ah ku gelaayo ,islamarkaana looga shakisan yahay in uu ka mid yahay dagaalyahandii kooxda Al-shabaab.
Markii ay soo dhamaaday dhageysiga dacwadii lagu soo oogay Jaceylkeyga Mahad,Waxaa hadalkii qaatay Qaadiga Maxkamdda si uu xukun u dul dhigo Mahad,wuxuuna ku xukumay lacag dhan 40,000 K.Sh ama in uu xabsiga ku qaato 2 Bilod o Xariga ah,kadib la Musaafiriyo.
Talo faraheyga wey ka baxaday wax aan sameeyona ma garanayaao xitaa markii uu xukunka adag ku dhacay Mahad waan miir daboolmay waxaan soo baraarugay Mahada iyo Askartoo oo i dul taagan,Mahad ayaa igi dhahay gacaliso na keen waaxaa la’ ii wadaa xabsigii la igu xiri lahaa xukunkii wuu dhacay.
Aaaaaaaaaaaaah Alla maxaan Sameeyaaaaaaaaaa Magaraayo wax aan sameeyo,waan israacanay Asakartii iyi Mahad iyo Aniga si aan u soo arko xabsiga uu galayo gacaliyheyga Mahad Yare,Askartii baan ka codsaday in la’ i siiyo qadar 1 daqiiqo ah oo aan kula hadlo Mahad waan la ii ogolaaday.
Waxaana u sheegay in Mahad uu isdejiyo waxaana ay u qadarnaayeen, inkastoo aan aniga sasabteedu lahaa in ciqabtaasi adag aad marto,Galaciliye Mahad Dulqaado hana walwalin anigaa kuu maqan meehsaan waxbadan kuma sii jiri doontid.
Intaasi kadib Waxaan si haleel ah u aaday Bosteeda waxaan too jartay Tiketkii gaariga lagu raaci lahaa waxcaan helay gaari soo baxayo 2 Saacadoood kadib wxaan codsaday in gaarikaas la igu qoro si aan dhaqso u gaaro hoygii aan ka degnaa Magaalada Nairobi.
Markii aan imid gurigeyna waa Albaabka iga furtay Hooyadeey habayaan i si siinay oowaan aan isku dul ooynay Maadaama mudo dheer aan ismoogeen waxaan is marxabeynaba waalidka iyo walaalahey wxaan ala ii geeyay biyo qubey suuliga si aan u soo qubeesto.
Markii aan soo qubeestay waa la iisoo saftay waalidkeey iyo dhmaan walaalheey si aan uga sheekeeyo qaabka ay wax u dhaceen iyo meesha aan ku maqnaa mudadaasi 3 da bilood ah,balse aniga ma sheekeyn karin ,waxaan ku marmarsiyooday in uu i hayi daal iyo rafaad fara badan oo aan u sheekeyn doono berrito haduu Alle idmo.
Murugadii baa igu badatay waxaa la ii keenay raashid iyio cabitaan maadaama aan ahay qof hada safar ka soo gashay walee adunkaan yaa war isku ahayo hee awaraf iyo Shimbir War iskuma hayaan ayuu xaalka marayaa maxaan cuni karaa murugio baan la daalaa dhacayaa?,waxaan ku iri waxana hada ma cuni karo waan daalanahay lalabo ayaa i heyso waan jiifanayaa ee hadoow i kiciya markaas baan qadeynayaa.